Dagaal Sanaag ku dhexmaray Ciidammada Somaliland iyo Puntland | Berberanews.com
Home WARARKA Dagaal Sanaag ku dhexmaray Ciidammada Somaliland iyo Puntland
Sanaag-(Berberanews)-Ciidamada Militeriga Somaliland ayaa sheegay in saaka subaxii hore dagaal ka dhacay deegaanka Bariga Sanaag, kuwaas oo ay iskaga hor yimadeen ciidanka Somaliland iyo ciidanka Puntland.
Afhayeenka ciidanka militeriga Somaliland Gashaanle Sare Cabdi Cabdilaahi Xasan ( Cabdi Dheere) ayaa xusay in weerar kaga yimid dhinaca Puntland, ka dibna ay iska difaaceen.
“Waxa jira inay Maamulka Puntland ciidamadoodu weerareen shalay badhasaabka laasqoray ee Somaliland, isku dayeena inay dilaan, hase ahatee illaahay ka badbaadiyay, waxay daandaasi joogta ku hayaan dadka Somaliland ee degan badhan iyo degaanada ku hareeraysan “ayuu yidhi afhayeen Cabdi Dheere oo ka warbixinaya dagaalo shalay iyo maanta ka dhacay deegaanka Laasqorey iyo deeganka Yubbe.
“Saaka abaaro lixdii iyo badhkii (6:30 Am) subaximo, waxay ciidamada Maamulka Puntland isku day dagaal ka bilaabeen degaanka kadhada oo 18km u jira Yubbe, halkaana waxaa isku haleelay ilaaladda hore ee ciidanka qaranka Somaliland iyo dagaal oogayaasha ciidanka Puntland halkaas oo ciidanka qaranku dhirbaaxo lama ilawaana ku dhuftay kana soo hooyeen guulo, iyagoo ka qabsaday hub iyo gaadiid intaba.”ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay ciidanka Qaranka Somaliland.
Waxaana intaas lagu daray “”Ciidanka qaranka Somaliland doonimaayo dagaal, laakiin haddii laga dayn waayo daandaansiga joogtada ah wuxuu ka gudan doonaa wajibaadkiisa cid kasta oo isku dayda inay daandaansato Somaliland.”
Dagaalkan u dhexeeya Somaliland iyo puntland ayaa shalay iyo maantaba ka dhacay bariga gobolka Sanaag, kuwaas oo ay isku hayaan gacanta ku haynta deegaanka.
Previous article“Waxay weerar ku soo qaadeen Guddoomiyaha gobolka Badhan” Wasiir Sahal
Next articleWasiirka Hawlaha Guud oo raaligelin ka siiyay HAS Petroleum eedo uu u jeediyay